High-notes King Chen ဆိုတာ ...
EXO အဖွဲ့ဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး Kpop Group တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ အဖွဲ့ဝင်ကိုးယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး Suho, Xiumin, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai and Sehun တို့ပါဝင်ပါတယ် ။ စစပွဲဦးထွက်တုန်းက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Kris, Tao နဲ့ Luhan တို့ကတော့ အဖွဲ့ထဲက ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ ။ EXO အဖွဲ့ဟာ April 8, 2012 တုန်းကစတင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့အဖွဲ့ ထဲက member တွေရဲ့ အကြောင်းကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် ။
အနုပညာအမည် : Chen
အမည်ရင်း : Kim Jong Dae
မွေးနေ့ : September 21, 1992
ရာသီခွင် : Virgo
လူမျိုး : Korean
အရပ်အမြင့် : 173 cm (5’8″)
ဇာတိ : Siheung, Gyeonggi province
အဖွဲ့ခွဲ : EXO-M, EXO-CBX
ကျွမ်းကျင်မှု : Singing, piano
စွမ်းရည် : Lightning (Scorpion)
Chen ရဲ့ မိသားစုမှာတော့ အဖေအမေနဲ့ အကိုတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ။
သူဟာ ကြင်နာတတ်တယ် ။ နူးညံ့တယ် ။ ဆင်ခြင်တွေးတောနိုင်စွမ်းရှိတယ် ။ ဟာသဥာဏ်ရွှင်တယ် ။ တက်ကြွတယ် ။ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ် ။ ယဉ်ကျေးတယ်လို့ နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ် ။
သူရယ်တိုင်းမှာ လျှာထုတ်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိပါတယ် ။
သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ high-notes တွေထိကိုအကောင်းဆုံးဆိုနိုင်တဲ့သူပါ ။
အသံပါဝါအပြည့်ရှိပါတယ် ။ SM Entertainment ကို 2011 ခုနှစ်မှာ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ဖခင်ကတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါပဲ ။တကယ်လို့သာသူအဆိုတော်တစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆို vocal trainer တစ်ယောက်ဖြစ်နေမလားမသိဘူးတဲ့ ။ ပွဲဦးမထွက်ခင်က သူ့မိဘတွေကသူ့ကိုအဆိုတော်လုပ်ဖို့ သဘောမတူခဲ့ပါဘူး ။ SM Entertainment ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုဟာ သူတို့သားလေးအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တာကို သူတို့လေ့လာပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Chen ကို အပြည့်အ၀ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
Chen ဟာ ဟာသဥာဏ်ရွှင်ပြီး အဆော့သန်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါတဲ့ ။
အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကို ဟာသတွေလိုက်ပြောပြီး လိုက်စနေတတ်ပါတယ် ။ သူက Group ရဲ့ Troller တစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူပါ ။ အခြား အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဆေးထိုးကြမ်းလို့ ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လုိ့ ဆိုကြပါတယ် ။
အင်တာဗျူးအချို့ မှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေ့ရတတ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ Chen ဟာ အလွန်သွက်လက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
EXO အဖွဲ့မှာ အသံအကောင်းဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အကအညံ့ဆုံးသူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။
ပွဲတစ်ပွဲမှာ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်က သူ့ကို Dancing Machine လို့ ခေါ်လိုက်တဲ့အခါ EXO အဖွဲ့သားတွေအားလုံး ၀ိုင်းရယ်တာကိုသူခံလိုက်ရပါတယ် ။
ထိုကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Chen က သူအကနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာမှာပါ ။ ခုလက်ရှိကတော့ အဆိုပိုင်းကို perfect ဖြစ်ဖို့အရင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။
ကိုရီးယားလူမျိုးပေမယ့် EXO-M အဖွဲ့ခွဲရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ပါ ။ Fansign event တွေမှာဆိုရင် သူဟာအဖော်ရွေဆုံး အဖွဲ့သားဖြစ်ပါတယ် ။ စကားတွေပြောတယ် ။ Fan တွေကို ဧည့်ခံတယ် ။ အထူးသဖြင့် ပရိတ်သတ်မမ တွေကိုဆို အရမ်းကောင်းကောင်း ဧည့်ခံတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ =D Fan တွေပြောသမျှဟာသတွေတိုင်းကိုလဲ ရယ်မောနေတတ်တဲ့သူပါ ။ လေဆိပ်မှာ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်က သူတို့ကိုလိုက် ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် နောက်ကတိုးလို့ ဖုန်းပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါ Chen က ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးကို ဂရုစိုက်ပြီးသွားကြဖို့ပြောပြီး ဖုန်းလေးကိုပြန်ကောက်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
သူဟာ အရင်က Video Game ကိုဘယ်တော့မှဆော့လေ့မရှိသူပါ ။ EXO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီးတော့မှ Game ကိုကောင်းကောင်းဆော့တတ်လာပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် လည်း အဖွဲ့သားတွေနဲ့ပြိုင်ဆော့တိုင်း အမြဲရှုံးလေ့ရှိပါတယ်တဲ့ ။ သူရဲ့ဝါသနာကတော့ သီချင်းဆိုရတာရယ် စန္ဒယားတီးရတာရယ်ပါ ။
R&B ဂီတအမျိုးအစားကိုသူသိပ်နှစ်သက်ပါတယ် ။ အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေက Donald Duck နဲ့ Garfield တဲ့ ။ အကောင်တွေချည်းနော် ။ အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကတော့ ပန်းရောင်လို့ဆိုပါတယ် ။
သူ့ဆီမှာရှိတဲ့ MP3 Player နဲ့ Notebook ကသူအနှစ်သက်ဆုံးပစ္စည်းတွေပါ ။
ထမင်းလိပ် ၊ တရုတ်အစားအစာ ၊ ဟော့ပေါ့ ၊ ဖက်ထုပ် ၊ ပေါင်မုန့်နဲ့ ကိုရီးယားအစားအစာတွေကိုကြိုက်န်ှစ်သက်တယ် လို့သိရပါတယ် ။
အကြိုက်ဆုံးကတော့ သူ့မိဘတွေရဲ့ လက်ရာစားစရာတွေပါပဲတဲ့ ။ သူဟာ မေ့တတ်သူဖြစ်တာမို့ တစ်ခုခုဆို စာအုပ်ထဲမှာချမှတ်ထားတဲ့အလေ့အထရှိပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့်မို့ သူ့မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲကအကြိုက်ဆုံးဆို Notebook လို့ပြောခဲ့တာပါ ။ သူဟာ သူလိုချင်တာမှန်သမျှရရမှကျေနပ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးရှိတယ်လို့လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀န်ခံထားပါတယ် ။ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းကတော့ Xiumin ပါ ။
Super Junior ကအကိုတွေကတော့ သူ့ရဲ့ စံပြတွေဖြစ်ပါတယ် ။ Justin Timberlake နဲ့ Maroon5ကသူကြိုက်တဲ့အဆိုတော်တွေပါတဲ့ ။ Chen ဟာ သိပ်ပြီး Romantic ဆန်တတ်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ သို့ပေမယ့် သူဟာ လူတွေကိုသိပ်ဂရုစိုက်တတ်ပါတယ် ။ သူတစ်ချိန်ချိန်မှာလက်ထပ်ခဲ့မယ်ဆို သူ့ရမယ့် ဇနီးဟာ ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိမယ်လို့ သူမျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့ ။ Chen ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးပုံစံကတော့ သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ မမဖြစ်ရမယ် ။ သူ့ကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးကို သူသဘောကျတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် ... ။ Chen အကြောင်းပြီးတော့ အခြား အဖွဲ့သားတွေအကြောင်းဆက်လာမယ်နော် ... Page လေးကို ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးလို့ ...
Source : Kprofile